Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya rag hubeysan oo caawa fiidkii dilal toogasho ah ka fuliyay bartamaha magaalada Boosaaso. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya rag hubeysan oo caawa fiidkii dilal toogasho ah ka fuliyay bartamaha magaalada Boosaaso.
Allhadaaftimo December 28, 2018 Uncategorized
Sida wararku ay sheegayaan Rag ku hubaysan bastoolado ayaa toogasho ku dilay Sadex askari oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ciidamada daraawiishta Puntland gaar ahaan kuwa qaabilsan howlagalada buuraha Galgala ee Dhiirane.
Goob jooge ka agdhawaa halka uu dilku ka dhacay ayaa HM u xaqiijiyay geerida sadexdan askari iyo dhaawac soo gaaray hal askari waxaana uu hadalkiisa intaasi ku daray in ragga la dilay loogu tagay goob mehrad ah oo u dhow xarunta dhexe ee shirkada isgaarsiinta Golis.
Dhacdadan ayaysan wali ka hadlin laamaha amaanka ee gobolka Bari inkastoo ay dilka kadib goobta gaareen ciidamada amaanka kuwaas oo baaritaano ka bilaabay goobta dilka uu ka dhacay.
Mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa faraha ka baxay amaanka guud ee magaalada Boosaaso mana jirto faahfaahino dheeraad ah oo ay bixiyaan lamaaha amaanka kadib marka ay dhacaan falalkan noocan oo kale ah waxaana xusid mudan in ciidamada amaanka ay howlagalo ka wadaan gudaha magaalada.
Wixii warar ah ee kusoo kordha dib ayaan idinkala socodsiin doonaa
Previous Dawlada Itoobiya ayaa waxaa ay 19 safiir u magacowdey dalalka dibada ee ay Itoobiyada Safaaradaha ku leedahay
Next Puntland Oo Masuuliyiinka Dowladda Dhexe Ee Somaliya Ka Namnuucday Garoowe